प्रधानमन्त्रीलाई मिर्गौला दिने ‘भान्जी’ ! | Pennepal
Home हेडर प्रधानमन्त्रीलाई मिर्गौला दिने ‘भान्जी’ !
प्रधानमन्त्रीलाई मिर्गौला दिने ‘भान्जी’ !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अघिल्लो आइतबार छुट्टै रौनक थियो । फागुन ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिन परेकाले प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरू भेला भएका थिए । उनलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै सानो केक पनि काटेका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवासमा प्रायः देखिइरहने एक महिला पनि त्यहाँ उपस्थित थिइन् । केही समययता प्रधानमन्त्री निवासमा बाक्लै आउजाउ गरिरहेकी ती महिला नातेदार हुन् भन्नेबाहेक सचिवालयमै कार्यरत धेरैलाई उनको परिचय थाहा थिएन । त्यस दिन भने प्रधानमन्त्री ओली आफैंले ती महिलाको परिचय गराए । सचिवालयका उपस्थित सदस्यहरूलाई ओलीले भने, ‘मलाई मिर्गौला दिने उनी नै हुन् ।’ कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्रधानमन्त्रीले सचिवालयका सदस्यहरूलाई मिर्गौला दाताका रूपमा चिनाइएकी ३२ वर्षीया ती महिला झापाकी हुन् । नातामा उनी ओलीकी ‘भान्जी’ पर्छिन् । ससुरालीतर्फ नाता पर्ने ललितपुरकी महिला ५० वर्ष उमेर कटेकी र उनको मिर्गौलामा पनि केही समस्या देखिएकाले घरतर्फबाट नाता पर्ने झापाकी महिलाबाट मिर्गौला लिने निष्कर्षमा चिकित्सकहरू पुगेका हुन् ।
झापा, चारआलीकी ३२ वर्षीया ती महिला पहिले ओलीलाई मिर्गौला दिने अन्जान घिमिरेकी भान्जी हुन् । त्यस हिसाबले उनी प्रधानमन्त्रीकी पनि ‘भान्जी’ नाता पर्ने पारिवारिक स्रोतहरूको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार भान्जी पर्ने महिलाको दाहिनेतर्फको ‘१०।२ बाई ३।८ सीएम’ आकार रहेको मिर्गौला झिकेर प्रधानमन्त्री ओलीमा प्रत्यारोपण गरिनेछ । उनको देब्रेतर्फको मिर्गौलामा निकै मसिना सिस्ट ९फोका० देखिएकाले दाहिने मिर्गौला प्रधानमन्त्रीका लागि उपयुक्त हुने निष्कर्षमा चिकित्सकहरू पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण दोस्रो पटक बुधबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा हुने भएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । उनी सोमबार अस्पताल भर्ना हुँदै छन्। त्यसका लागि आइतबार बिहान ग्रान्डी अस्पतालमा उनको स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो। अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको बताए। ‘उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट राम्रो आएको छ’, उनले भने। प्रधानमन्त्रीको मुटु, ठूलो आन्द्रा, रगतको जाँच गरिएको थियो। स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट राम्रो आएपछि आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चिकित्सकसँग छलफल भएको थियो।
पहिलो पटक ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण २०६४ साउनमा भारतको अपोलो अस्पतालमा गरिएको थियो। त्यस बेला बुहारी नाताकी अञ्जना घिमिरेले मिर्गौला दिएकी थिइन्। पहिलोभन्दा दोस्रो पटकको प्रत्यारोपण अलिक जटिल हुने चिकित्सक बताउँछन्। ओलीलाई दोस्रो पटक मिर्गौला दिन आफन्त नाताकी एक महिला तयार भएकी छन्। चिकित्सकका अनुसार उनको स्वास्थ्य जाँच गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ। वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ प्रा.डा.दिव्यासिंह शाहले प्रत्यारोपणको संयोजन गरिरहेकी छन्। प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सकसमेत रहेकी डा. शाह स्वदेशी एवं विदेशी चिकित्सकसँग परामर्शमा छिन्।
ओलीको स्वास्थ्य रिपोर्ट आइतबार बालुवाटार पठाइएको वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा।अरुण सायमीले बताए। ‘सबै रिपोर्ट आजै ९आइतबार० पठाइएको छ। प्रत्यारोपण गर्न सकिने अवस्था छ’, उनले भने। उनका अनुसार प्रत्यारोपणमा विदेशी चिकित्सकसमेत संलग्न हुने सम्भावना छ। ‘विदेशी विज्ञ पनि ल्याउने सम्बन्धमा डा। दिव्यासिंह शाहले नै समन्वय गर्नुभएको छ’, उनले भने।
बबइ सिंचाई योजना : तीन दशकमा पुरा भएन